Dhaawaca Abraham Wuxuu Ka Dhigayaa Chelsea Inay Ku Dhacdo Gooldhaliyo La Aan | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Blues ayaa ku jirta qaab ciyaareed aad u liita isla markaana u halgamaya sidii ay goolal u dhali lahaayeen laakiin waxaa laga yaabaa inaysan jirin wax imaansho ah oo muhiim u ah Stamford Bridge inta lagu jiro bisha Janaayo.
Chelsea ayaa ka tagtay garoonka iyagoo niyad jabsan ka dib labadii kulan ee ugu dambeysay ee Premier League. Erey bixinta ayaa ka soo socota kooxda dhalinyarada ah ee Frank Lampard dadkuna waxay raadinayaan jawaabo.
Sida caadada ah, fikirka koowaad ee bisha Janaayo waa inuu ku riyoodo wax weyn oo ku saabsan wareejinta laakiin inta badan kooxaha ugu waa weyn England waa inay la kulmaan xaqiiqda ah in ciyaaryahanka ay doonayaan laga yaabo inaan la gaari karin inta lagu jiro suuqa jiilaalka.
Daafaca kooxda Arsenal ee 10-ka nin dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka dhaliyay 1-0 ka dib 2-1 ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah oo ka dhacay garoonka Stamford Bridge ayaa ka dhigtay taageerayaasha Chelsea inay Cadhoodaaan
Lampard ayaa wajahay su’aalo la xiriira arintaan ka dib niyad jabkii ugu dambeysay ee Chelsea laakiin wuxuu umuuqday inuu ka taxadarey fursadaha kooxdiisa ka heleyso inuu helo bedelilaha ciyaartooyda ee u baahan inuu horumariyo kooxdiisa
Lampard ayaa yiri: “Waan ogahay halka aan ugu baahan nahay xoojinta, laakiin waa daaqad adag, anaga ahaan. “Waxay u badan tahay in Aan ka fikirno
“Waxa xilli ciyaareedkan na siiyay oo sii wadayaga inuu na siiyo waa jawaabo garoonka dhexdiisa, iyo meelaha aan u maleynayo inaan ka fiicnaan karno. Taasi waa aniga inaan saxaan,
Weeraryahanka 15-ka ah ee gooldhalinta ayaa ka dhigtay inuu yahay nin karti gaar ah leh, 22-jirkan ayaa jiritaankiisuna ay sii adkaan doontaa haddii aysan jirin fursado kale oo weerar ah
ayaa ku jira inuu awood u leeyahay inuu si joogto ah goolal u dhaliyo oo uu kubada si habsami leh u qabto.
Michy Batshuayi ayaa joogay Chelsea seddex sano iyo badh hadda laakiin shaki
Waana sababtaas sababta dhabta ah ee uu xiddiga reer Belgium u yahay bedelka joogtada ah, halka Abraham loo siiyay maaliyada No 9 ka dib markii uu ku soo laabtay Chelsea ka dib amaah uu ku qaatay kooxda Aston Villa
Waxaa xusid mudan, Batshuayi ayaa kaliya afar jeer ku soo bilaabay Premier League mudadii uu joogay Antonio Conte, Maurizio Sarri iyo haatan Lampard laakiin wuxuu saftay 42 kulan.
Kulankiisii ​​ugu dambeeyay ee Arsenal, wax saameyn ah ma uusan sameyn karin, taasoo aan sameynin wax walba oo lagu horumarinayo rajada uu ka qabo inuu ciyaaro waqti dheeri ah.
Batshuayi ayaa ciyaaray kaliya 140 daqiiqo oo horyaalka ah intii uu ka hoos ciyaarayay Lampard iyo xitaa ninka la illoobay ee Olivier Giroud, kaasoo rajeynaya inuu ku biiro Inter bishaan, wuxuu arkay waxqabad dheeri ah xilli ciyaareedkan.
Tani waa iimaan la’aanta jahwareerkii Abraham ee Lampard uu xitaa isku dayay inuu Christian Pulisic u isticmaalo been abuur 9 ah kulankii ay wajaheen West Ham.
Haddii Chelsea aysan helin Cavani, ka dib taageerayaasha Blues waa inay aqbalaan suurtagalnimada dhabta ah ee inaysan imaanin koox cusub bishaan, iyadoo Lampard uusan xiiseyneynin inuu la soo wareego ciyaartoy boosas kale ah haatan.
Taasi way adkaan doontaa in la aqbalo taageerayaal badan, maadaama Chelsea laga filaayey inay aad u firfircoon tahay ka dib markii laga qaaday xayiraadii suuqa kala iibsiga.
Walaaca ugu weyn, in kastoo, wuxuu ku sii nagaan doonaa taam ahaanshaha Abraham.
Xitaa haddii dhaawacaan uusan cadeynin inuu yahay mid halis ah,
Haddii 22 jirka Abraham uu nasasho u baahdo ama uu dhaawac soo gaaro waqti dambe, yaa bedeli doona booska sarre? Jawaabtu wali waa qarsoodi.
Tottenham ayaa durbaba la dhibtooneysa la’aanta Harry Kane, halka xilli ciyaareedka Manchester United laga yaabo inuu jahwareer ku jiro maqnaanshaha Marcus Rashford.
Chelsea, si kastaba ha ahaatee, xitaa si ka liidata ugama qalanto sidii ay ula tacaali lahaayeen mudada dheer ee maqnaanshaha weeraryahankooda